Sidee Fayraska Fayraska 'Coronary Virus' looga filayaa inuu sii socdo | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSidee ayaa la filayaa inuu u dillaaco Coronavirus?
Sidee ayaa la rajeynayaa in cudurka 'coronavirus' uu sii socdo?
Dhimashada badankood waa dadka ka weyn 65 sano ama dadka liitoodu yar yahay. Dadkani waa inay sida ugu macquulsan u taxaddaraan. ”
In kasta oo heerka dhimashada uu hooseeyo, haddana ma aha inaan ku tiirsanaano koorsadan. “Fayras oo qof ka beddeli kara qof ilaa iyo qof walba waqti kasta, wuu kordhayaa waqti kasta oo wuxuu ku hanjabayaa qaab dhismeedka hidda-wadaha ee aadanaha, marka waa wax aan habboonayn. Cudurka faafa wuu fidi karaa heerka dhimashaduna wey sii kordhi kartaa. ”
Waa in taxaddar la muujiyaa markii lala xiriirayo dadka cusub ee ka yimid Shiinaha, laakiin waa inaan ogaano in dhammaan Shiineeska uusan cudurka qabin, gaar ahaan kuwa aan muddo dheer ku maqnayn Shiinaha.
MA JIRA DAAWADA CUDURKA?
70 kun qof ayaa la filayaa inay la safraan YHT
Mashruuca Magaalada caasimada ah ee TCDD ee Gulermak-Kolin ee mashruuca wadajirka ah…